Ngaba ukuthengisa kuka-Apple kuyasonwabisa? | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 28, 2009 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Ngubani othengisayo ophumeleleyo apha, iApple okanye iMicrosoft? Cofa ngokusebenzisa ukuba awuyiboni ividiyo.
Esi sithuba siphefumlelwe yincoko endijoyine ngayo malunga IMicrosoft ifumana indawo yokubuyela umva ngokuchasene neApple. Incoko iqhubeke kwi-Twitter ngetwitter enkulu evela kuKara:
ukusuka ikaraweber: @douglaskarr uyonwabele iposti yanamhlanje. USnarky uphumile, kwaye iphulo elithi "NdiyiMac" liqala ukufunda njenge-snarky. (FTR, ndingumlandeli weApple, nayo).
Ndiyathemba ukuba oku kubangela impikiswano enkulu. I-Apple ithathwa njengelinye lawona maqela aphambili okuthengisa kwiTekhnoloji namhlanje, kodwa ndiqala ukuba neengcinga zesibini malunga neenzame zabo. Ngaba ukuthengisa kudlale indima enkulu kwimpumelelo ye-Apple? Okanye ngaba yayingumvuzo nje owawulahlwayo? Nceda ungaxubi imveliso kunye nentengiso kule-ndiyayiqonda ukuba i-iPhone ngumtshintshi womdlalo kwishishini. Umbuzo wam ayikokuba i-Apple ineemveliso ezinkulu okanye hayi, ingaba zingakanani iimpembelelo kwintengiso ezinazo ekukhuleni okukhulu kwe-Apple kwintengiso?
Ngaba yayiyintengiso yokwenyani yeApple eyenza umahluko?
Xa amaxesha enzima kwaye ingeniso elahlwayo iphantsi, abathengi kunye namashishini kufuneka benze izigqibo ezinzima ngakumbi zokuthenga. Kuba iMicrosoft iphumelela ukubuyisa isabelo sentengiso esivela kuApple kwizinto ezinjengeelaptops, kubonakala ngathi iMicrosoft iyaphumelela xabisa imfazwe. Oko kukuthi, ukuthengisa kuka-Apple kuyilo olupholileyo, oluhle, ukusetyenziswa ngokulula, kunye nengxaki encinci… ayisebenzi.
Oko kuthetha ukuba abathengi abakrelekrele abakholelwa ukuba iindleko zeApple zibalulekile. U-Apple akenzi njalo… kwaye andikholelwa (kwaye noKara akenzi njalo) ukuba ezentengiso ziyabanceda. Ngapha koko, ndicinga ukuba banokuvakala nje njengabanye abantwana abonakeleyo abaqhayisa ngento yabo entsha yokudlala kwaye banike umnwe ukusekwa (ndim nawe).
Kungalixesha lokubulala yonke iMac ngokuchasene nephulo lePC.
Into ephambili kwintengiso enkulu yile ixesha elifanelekileyo. Kubalulekile ukuba ukuthengisa kwakho kuhlala kufanelekile kubaphulaphuli bakho… kunye notshintsho kuqoqosho olunefuthe kwizigqibo zokuthenga kwabantu. Ngenxa yoko, kubalulekile ukuba uhlengahlengise ngokufanelekileyo. Lixesha lokuba iApple ihlengahlengise.
tags: apileintengiso yeapile
Meyi 28, 2009 kwi-9: 38 AM
Ndicinga ukuba umhlathi wakho wokugqibela uchaza ukuba kutheni i-Apple ilahlekelwa isabelo semarike. Ingqondo yomthengi itshintshe kakhulu kulo nyaka uphelileyo okanye kunjalo kwaye i-Apple ayikatshintshi isicwangciso sayo sokuthengisa. UMicrosoft unayo, iintengiso zeelaptop ezingaphantsi kweedola ezili-1500 ziya ngqo entliziyweni yomthengi onexabiso.
Meyi 28, 2009 kwi-11: 55 AM
Ubeke kakuhle! Iintengiso ze-Apple zinqabile ngokupheleleyo. Andizange ndibathande kwaye ndingakwazi ukubeka umnwe wam ukuba kutheni, kwaye yi-snark ngokuqinisekileyo.
Meyi 28, 2009 kwi-12: 16 PM
Ndicinga ukuba bakhona, kwaye sele ixesha elithile, bethengisa kwinqanaba elithile lolwazi. Kubantu abangafuni kwaphela ukukhenketha ngoomatshini babo (ngokuqinisekileyo ayindim), ukuthengisa kwabo kuyasebenza kuba bezama ukubonisa ukuba balula kangakanani na. Intengiso yabo ekhuthaza “iiGeniuses” ayindincedi nganto, andifuni kwaye andikwazi ukuya kwindawo ephithizelayo enabantu abaninzi ngexesha leeyure zomsebenzi eziqhelekileyo, kodwa NDINOkukhangela kwi-intanethi ukufumana uncedo kwi-90%+ yesabelo semarike yePC. abasebenzisi. Intengiso yabo “yokuphelisa” izama ukundixelela ukuba lukhetho olunye kuphela olulungileyo, kodwa xa ndathenga ilaptop yam yamva nje, iiMac zagqithiswa ngenxa yokuba zazingenalo uphawu oluchanekileyo endandiludinga, kodwa ndiye ndakwazi ukufumana iPC efanelekileyo. ibinayo yonke into endiyifunayo.
Meyi 28, 2009 kwi-2: 02 PM
Ndandingumlandeli weejabs ezifihlakeleyo ezenziwe kwisibini sokuqala soluhlu lweMac yongeza. Kodwa ndacinga ukuba bathatha kakubi kakhulu inguqu malunga neenyanga ezili-9 ezidlulileyo, malunga nexesha "i-Vista bashing" yaqala. Ukusukela ngoko, uluvo lwam ngeentengiso zabo luye lwahla kancinci.
Kum, ezona ntengiso zimva nje zenza umsebenzi ongcono wokwenza abasebenzisi beMac abakhoyo bazive bephezulu malunga nokhetho lwabo kunokuba besenza ukuzisa abasebenzisi abatsha efoldeni. Ngobunono (kwaye ngokuhlekisayo) bonisa izibonelelo zemveliso yakho kwaye abantu baya kuza kwicala lakho. Ukuhlambalaza ngokugqithisileyo ukhuphiswano, kwaye ngokungathanga ngqo abo balusebenzisayo, kwaye ubeka umngcipheko wokuhlukaniswa kunye nokwala ngenkani ukuqwalasela utshintsho.
Andiqinisekanga ukuba zisebenza kangakanani na iintengiso ze-Microsoft Laptop Hunter zizonke, kodwa zibonisa ixabiso kunye noncedo olwahlukileyo lweekhompyuter ezisekelwe kwiWindows. Mna buqu, bendifuna i- $ 2,800 17 ″ yeMacBook Pro, kodwa ndithenge i-325 Windows-based netbook. I-netbook ichasene ngokupheleleyo ne-MacBook Pro, kodwa umahluko wamaxabiso ubangele ukuba ndiphinde ndiqwalasele oko kubalulekile xa kuthelekiswa nokuba yintoni enokuba mnandi ngokwenene ukuba nayo.
I-Apple iya kuhlala ine-tech-enthusiast ethembekileyo elandelayo, kwaye ukongezelela kuya kubakho abo bakulungeleyo ukuhlawula ngakumbi ukusetyenziswa okukhulu. Kodwa uqoqosho lwangoku lunyanzela abantu abaninzi ukuba benze izigqibo ezisekelwe kuphela kwiindleko zangaphambili, kwaye oko akuzange kube licandelo lemarike apho i-Apple ijonge ukukhuphisana. Kwaye iintengiso zabo zangoku aziyiphuculi le meko, ngcono okanye embi.
Meyi 28, 2009 kwi-7: 40 PM
Emva kwexesha ndeva uMerlin Mann esithi ukuba ukuthenga i-apile ayifanelanga mali, ayifanelanga imali- endikholelwayo.
Ukubhengeza: Ndisebenzisa iMac emsebenzini kunye nomatshini weWindows ekhaya.
Meyi 28, 2009 kwi-11: 45 PM
Ndicinga ukuba uyabhida urhwebo kwaye intengiso.
Intengiso ye-Apple ukusukela oko kubuyiswa kweMisebenzi ibiqaqambile ngokungathandabuzekiyo ngelixa ezinye iintengiso kunye namaphulo ngamanye amaxesha besilela.
Ndiyakholelwa ukuba ingxabano yokuba impumelelo enkulu ye-Apple yamva nje kungenxa yokuthengisa bubuxoki ngokupheleleyo. Ilitye lembombo lesicwangciso se-Apple ibisoloko isenza iimveliso ezintle, hayi ukuthengisa okukhulu.
I-iPod ibe yimpumelelo enkulu hayi ngenxa yentengiso ye-silhouette yomdaniso, kodwa ngenxa yokuba yayi/yimveliso ebalaseleyo eyayi/ ingaphezulu nangaphezulu kunayo nayiphi na enye into ekhoyo kwimarike.
Kungakhathaliseki ukuba iimeko zoqoqosho, abathengi baya kuhlala behlawula iimveliso ezinkulu. I-Apple yasekwa kwimeko yokudodobala koqoqosho kwaye iyaqhubeka nokukhula kolu kwehla koqoqosho.
Ibango lokuba iMicrosoft ifumana isabelo-malike kwi-Apple inokuba liphambi kwexesha. I Iingxelo into endiyibonileyo ibonakala ngathi ibango elichaseneyo.
Meyi 29, 2009 kwi-12: 31 AM
Nangona ndikhankanya iintengiso, ndisathandabuza ukuthengisa, hayi intengiso. Nam andisabuzi ngemveliso engakholelekiyo. Ndiphendula kule nkcazo nge-Ipod kwaye ilaptop yam endiyikhethileyo yiMacBookPro yam. Umbuzo wam ngowokuba bungakanani ubunzima obuneendlela zokuthengisa ze-Apple kwimpumelelo yabo? Ngaba yayibubutyebi nje obunendima?
Meyi 29, 2009 kwi-8: 51 AM
Ndiyayithanda le ngxoxo. Enkosi ngokuyiqala. Ngokombono wam, i-Apple ine kwaye iya kuqhubeka nokuba nentengiso eqaqambileyo. Inkampani iye yanyamezela ukuhla okuninzi, inxalenye enkulu ngenxa ye-savvy yokuthengisa kunye nokukwazi ukulungelelanisa kwi-dime. Iphulo lentengiso yangoku yinto enye kuphela yesicwangciso, endicinga ukuba amaninzi amagqabantshintshi agxininise kakhulu. Ndicinga ukuba ireferensi yentengiso ekuqaleni ibeka abantu kulo mzila. Nokuba kunjalo, icebo lentengiso lika-Apple libandakanya okungaphezulu kweqhekeza lentengiso yobuchule. Ukucwangciswa kwemveliso, amaxabiso, ukubeka, ukuyila, kunye nexesha eliqhutywe ngokubhengezwa okujoliswe kuyo, i-pr, isiganeko, kunye nezinye izicwangciso zokuthengisa ngokuthe ngqo kunye nezingathanga ngqo kunye namaqhinga ziya kugcina le nkampani iphambili kwiingxoxo zentengiso ixesha elide.
UJoey Logano Umlandeli
Jun 3, 2009 ngo-3:56 AM
Molo Douglas, uxolo ngokushiya uluvo olungekho sihloko, kodwa kubonakala ngathi likhonkco lokuqala, elithi ukucofa ukuze ubone ividiyo, linxibelelanisa nevidiyo ekhokelela kwiphepha le-404, “Asiyifumananga loo nto! Mhlawumbi ulahlekile okanye silahlekile!”. Kwakhona… uxolo lwam ngezimvo ezingaphandle kwesihloko.